Afar umuurood oo ku xallismaysa go’aanka MW Farmaajo & mid ugu mudan oo weli isaga u XAYIRAN! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Afar umuurood oo ku xallismaysa go’aanka MW Farmaajo & mid ugu mudan...
Afar umuurood oo ku xallismaysa go’aanka MW Farmaajo & mid ugu mudan oo weli isaga u XAYIRAN!
(Muqdisho) 03 Maajo 2021 – Wasiirkii hore ee Qorsheynta DF Somalia, Cabdiraxmaan Caynte, ayaa qoraal ka sameeyey tillaabadii uu qaaday MW Farmaajo oo Sabtigii sheegay inuu ka laabtay muddo kororsigii muranka dhaliyey, isla markaana uu ku ballan qaaday qabashada doorashada qaranka.
Caynte ayaa qoraalkiisa kusoo qaaday ilaa 4 qodob oo sabab u noqday ka noqoshada go’aankaas iyo in aysan howshu kamilnayn inta laga helayo qoraal rasmi ah oo saxiixan oo kasoo baxa isla mudane Farmaajo.
Hoos ka akhri qoraalka:
4. In hannaankii dimoqraadiga ahaa ee dalku ku socday 20-kii sano ee lasoo dhaafay dib loogu laaban doono, xoogaaga dhaawaca ah ee soo gaarayna la dhayi doono.
Si kastaba, Caynta ayaa yiri ” Waxaas oo dhan waa haddii uu mudane Farmaajo saxiixo warqad uu si rasmi ah ugu wareejinayo masuuliyadda amniga iyo midda doorashada R/Wasaare Rooble.”
Previous articleWaa maxay ujeedka ugu wayn ee wefdiga Qadar (Muxuu yahay Qaxdaani?)
Next articleKenya oo heshay fursad qaali ah oo si diblomaasiyadaysan uga aarsato Somalia oo iyadu isku mashquulsan (Warbixin)